Hevitra mahafinaritra tsara ho an'ny kitapo tote manokana. Famoronana an-tserasera
ny kitapo tote manokana izy ireo, amin'izao fotoana izao, fomba iray tena natoraly ary koa azo ampiharina. Raha raisina fa izao dia tsy maintsy andoavana plastika ary ao amin'ny magazay rehefa mividy azy io dia mahasoa kokoa ny mitondra ny kitapontsika, izany no fomba iray hamoronana zavatra tena anao ary doka ihany.
Ka anio dia hifantoka amin'ny harona lamba namboarina izahay. Hiresaka momba ny fampiasana azonao omenao izahay, ary momba ny hevitra mety ho mora ampiasaina hitrandrahana azy ireo ary ireo no, raha vao mahita azy ireo dia tsy afaka manadino azy ireo. Amin'ny faran'ny andro, io dia fomba fanaovana dokambarotra amin'ny zavatra izay anananao isan'andro.
1 Kitapo lamba manokana, inona no azo ampiasaina?
1.1 Hanao doka
1.2 Hampahafantatra ny marikao
1.3 Kitapo lamba namboarina manokana handeha hiantsena sy hikarakara ny tontolo iainana
2 Hevitra hanamboarana kitapo lamba manokana
2.1 Andian-tsarimihetsika, sarimihetsika na olo-malaza amin'ny lamaody
2.3 Sary maro karazana
Kitapo lamba manokana, inona no azo ampiasaina?
Talohan'izay, rehefa nandeha nividy tany amin'ny fivarotana lehibe ianao, rehefa nankany amin'ny mpanambola dia nanome anao kitapo maromaro ilay mpamatsy vola mba hahafahanao mametraka izay novidinao. Androany, manontany anao izy raha mila kitapo ianao ary, raha izany, ny zavatra voalohany hataony dia ny mametraka izany amin'ny lisitry ny fiantsenana. Raha atao teny hafa, dia miampanga anao amin'izany.
Tsy zavatra miseho fotsiny amin'ny orinasa sasany; Efa fanao io ary ezahina satria tsy dia be loatra ny fanjifana plastika, izay farany mahasoa ny tontolo iainana. Ka, maro no misafidy kitapo lamba, eny fa na ny supermarket aza. Ary raha mijery azy ireo ianao dia manana endrika tsara izy ireo, ankoatry ny sary famantarana na ny anarany eo amin'ny toerana hita tsara.
Izany hoe, ampandoaviny vola ianao amin'ny fampiasana an'io kitapo io ary miaraka amina dokambarotra maimaim-poana.
Avy eo, Maninona raha mampiasa kitapo tote manokana ho an'ny orinasanao na marika anao? Na mpamorona ianao, mpanakanto, mpanoratra ... Na manana orinasa lehibe na kely na salantsalany ianao; Na miasa ianao na miasa, dia afaka mamorona kitapo tote ho anao manokana koa ianao!
Ary manana fampiasana maro izy ireo:
Tsy maninona na manana magazay lamaody ianao, fivarotana firavaka, fivarotam-panafody, fivarotana kiraro, fivarotana lehibe ianao ... Ny zava-misy io kitapo mitondra ny sary famantarana anao io dia efa fomba iray hanaovana dokam-barotra. Ary midika izany fa:
Raha omenao endrika tsara izay manintona ny saina, na dia tsy dia hita loatra aza ny sary famantarana anao, amin'ny farany dia ho tsikaritr'izy ireo izany, ary ampifandraisin'izy ireo amin'ny kitapo ilay orinasa.
Raha misafidy ny logo fotsiny ianao, ny olana dia mety tsy tian'izy ireo hampiasa izany mihoatra ny fivarotanao (satria tsy te hanao dokambarotra anao izy ireo, satria tsy tian'izy ireo ny serivisinao ...) ary amin'ny farany dia ampiasainy izany. ao anaty trano. Mbola azo ampiharina izy io, saingy tsy mahomby amin'ny fanaovana doka ny tenanao.
Por eso ny magazay dia misafidy ny hanao kitapo lamba vita amin'ny lamba amam-bika miaraka amin'ny endriny samihafa, fa apetraho amin'ny fomba milamina foana ny sary famantaranao, tsy mitady toa izany tanjona izany tadiavina.
Hampahafantatra ny marikao
Mety tsy manana magazay ianao fa manompo olon-kafa. Raha izany dia ahoana ny momba anao manana kitapo manokana izay manao zavatra mitovy amin'ireo etsy ambony?
Raha mpamorona ianao dia afaka mamorona sary mamorona; Raha mpanoratra ianao, dia misy lahatsoratra fohy vita amina karazana endritsoratra isan-karazany mety hisarika ny saina betsaka; Raha mpaka sary ianao, ny sary tsara indrindra azonao atao dia afaka manokatra varavarana maro ho anao.
Kitapo lamba namboarina manokana handeha hiantsena sy hikarakara ny tontolo iainana
Ary farany, ny tanjon'ny kitapo lamba dia ny hamenoanao azy amin'ny zavatra. Raha tsy mividy kitapo koa ianao ary mampiasa azy io amin'ny vanim-potoana tsara, dia tsy hikarakara ny tontolo iainana fotsiny ianao, fa hanangona vola ihany koa amin'ny fotoana rehetra tsy voatery nividiananao kitapo ary nampiasanao ilay mahazatra .
Ity no iray amin'ireo antony mahatonga ny kitapo lamba ho lasa lamaody: izao no azonao atao aza mandany vola isaky ny mivoaka ianao ary mitondra zavatra tena tianao na efa nataonao manokana, tsy maninona na manao doka ianao na tsia.
Hevitra hanamboarana kitapo lamba manokana
Ary izao dia mandeha amin'ny zavatra tiantsika isika. Manolora endrika sy hevitra mety ho aingam-panahy hamoronana kitapo lamba anao manokana. Ary inona no azonay aseho anao?
Andian-tsarimihetsika, sarimihetsika na olo-malaza amin'ny lamaody
Ohatra, ho an'ny magazay mivarotra vokatra fialamboly, toy ny lalao video, firaketana, boky, andian-tantara amin'ny televiziona, sarimihetsika ... Izany rehetra izany dia azo ampiasaina hanamboarana kitapo lamba.
Azonao atao ny misafidy lohahevitra izay tena lamaody, toy ny andiany na toetra amam-panahy ary ampanjifaina ny kitapo misy ny sarin'ity. Tamin'izany no nanoloranao zavatra fantatrao fa hisy mpihaino (ary te-hividy ny olona).
Mazava ho azy, indraindray tsara kokoa ny manana safidy maromaro handrakofana mpihaino marobe. Ary aza adino ny manana habe samihafa, indrindra fa misy ny sasany izay tia kitapo lamba lehibe manokana ary ny sasany kosa maniry ny kely.
Manome anao hevitra vitsivitsy izahay.
Iza no milaza fa tsy mahomby ny kitapo lamba manokana misy soratra sasany? Manao izany izy ireo, saingy indrindra satria mitady hanao an'io lahatsoratra hita maso io izy ireo. Raha atao teny hafa, dia mampiasa karazana endritsoratra samihafa izy ireo mba hahasarika kokoa ireo litera.
Misarika ny sain'ny olona mahita azy ireo ary rehefa avy eo novakiana ny hafatra. Mazava ho azy koa Azonao atao ny misafidy ny manambatra azy ireo amin'ny sary na sary izay manome anao endrika manokana.
Avelanay eto ny sary vitsivitsy.
Sary maro karazana
Farany, afaka milaza aminao izahay fa raha ny momba ny fanaingoana ireo kitapo lamba dia hisy tontolo lehibe hisokatra ho anao. Ary izany dia mihoatra ny sarin'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika, andian-dahatsoratra, fonony, afisy, logo, lahatsoratra ... ary ireo sary dia afaka miteny ho azy manokana.
Ohatra, raha manana magazay ara-pahasalamana ianao, dia azonao atao ny mametraka hazo fijaliana maitso amin'ny kitapo lamba manokana. Na raha mivarotra kojakojan-tokatrano ianao, ahoana ny sarin'ny milina fanasan-damba misy maso sy vava maka tahaka ny olona kely?
Amin'ireny tranga misy kitapo lamba manokana ireny dia tsy ilaina ny mamerina azy ireo be loatra, fa ny antsipiriany no mampiavaka azy. Inona no dikan'izany? Inona ary tsy mila manahy be loatra ianao amin'ny famenoana kitapo iray manontolo amin'ny endrika iray, na loko, misy safidy maro, na ireo izay toa izany na ireo izay manana avana tsotra, na kintana, dia efa namboarina tanteraka nefa tsy mila bebe kokoa.
Izahay dia mamela anao hevitra maromaro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Hevitra ho an'ny kitapo lamba manokana